नेप्सेमा ६ अर्ब ९० करोड कारोबार, रेकर्ड तोडियो : RajdhaniDaily.com -
सिन्धुलीगढी रानीदरबारको पुनःनिर्माण हुने
बिमला पाण्डे - January 27, 2021 0
सिन्धुली । सिन्धुलीगढीमा रहेको भग्नावशेष रानीदरवारको पुनः निर्माण हुने भएको छ । जसका लागि ठेक्का स्वीकृत भई काम सुरु भएको छ । कमलामाई नगरपालिका...
जुम्लाको पोख्री गाउँमा भिषण आगलागी, २४ घर जलेर नष्ट ,आगलागी नियन्त्रण बाहिर
मान बहादुर कुँवर - January 26, 2021 0
जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको पोख्रि गाउँमा भिषण आगलागी भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले अहिलेसम्म आगलागीबाट २४ वटा घर जलेर नष्ट भएको...
सत्यन श्रेष्ठ - January 26, 2021 0
भगीरथ भण्डारी - January 26, 2021 0
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा मानहानीको मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा मानहानीको मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ताद्वय कञ्चन कृष्ण न्यौपाने र डा. कुमार शर्मा आचार्यले...
राजु पोख्रेल - January 26, 2021 0
दमक । झापामा पहिलो चरणमा ९ हजार व्यक्तिलाई कोरोना भाईरस (कोभिड १९) बिरुद्घको खोर्प कोभिसिल्र्ड’ लगाइने भएको छ । यसका लागि आवश्यक तयारी पुरा...
Home Breaking News नेप्सेमा ६ अर्ब ९० करोड कारोबार, रेकर्ड तोडियो
नेप्सेमा ६ अर्ब ९० करोड कारोबार, रेकर्ड तोडियो
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कीर्तिमानी कारोबार भएको छ ।
नेप्से बन्द हुने समयसम्ममा ६ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । ४.६९ अंकले बढेको नेप्सेमा एक करोड ५९ लाख कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
गत साताको बिहीबार कारोबार रकमको कीर्तिमान तोडिँदै आज नयाँ रेकर्ड बनेको हो । विहीबार नेप्सेमा ६ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा एक करोड ४० लाख कित्ता सेयर किनबेच भएको थियो । आज बैंकिङ २९.४४, विकास बैंक ०.६४ र अन्य समूह १.३५ अंकले उकालो लागेको छ ।
आज कोरोना भाइरसविरुद्धको ‘कोभिशिल्ड’ खोपको शुभारम्भ गरिँदै छ । आज बिहान १० बजे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट भर्चुअल विधिबाट खोपको शुभारम्भ...
बझाङ । बझाङमा खुँडा प्रहार गरी एक युवकको हत्या गरिएको छ । जिल्लाको छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–३ का २७ वर्षीय अमृत सिंहको खुँडा प्रहार गरी हत्या...
प्रदेश ३ बिमला पाण्डे - January 27, 2021
प्रमुख रासस - January 27, 2021
कला राजधानी समाचारदाता - January 25, 2021
राजपत्रमा प्रकाशित प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना इजलासमा पेश
प्रमुख रासस - January 22, 2021
काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको राजपत्र संवैधानिक इजलासमा पेश गरेका छन् । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ताद्वय टीकाराम...
वाग्मती । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीबाट राजीनामा...
ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एकजनाको मृत्यु
रासस - February 27, 2020
लहान । सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–४ बस्तीपुरस्थित सडक किनारमा रोकिराखेको ट्रकमा आज मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक गम्भीर घाइते...
प्रहरीमा धेरै दरबन्दी खाली : एआइजीमा कडा प्रतिस्पर्धा
नारायण ढुङ्गाना/रासस - February 27, 2020
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको उच्चदेखि तल्लो तहसम्म ठूलो सङ्ख्यामा दरबन्दी खाली हुन पुगेको छ । प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) र प्रहरी...
मछिन्द्र नयाँ च्याम्पियन
खेल दिल तामाङ - February 16, 2020
काठमाडौं । मछिन्द्र अघिल्लो सिजन रेलिगेसनबिनाको लिगका कारण शीर्ष श्रेणीमा टिक्न सफल भएको टोली हो । त्यही कमजोर...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - December 13, 2020
कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–५ चन्द्रौटामा एक महिलाको गए राति हत्या भएको छ । चन्द्रौटाको पुरानो बजारमा डेरा गरी बस्दै आएकी दाङ सतवरिया घर...
पाकिस्तानमा लडाकू विमान दुर्घटना
Not-to-be-missed एजेन्सी - March 11, 2020
इस्लामाबाद । पाकिस्तानको हवाई फौज (पीएएफ) को लडाकू विमान एफ–१६ राजधानी इस्लामावादस्थित एउटा पार्क नजिकै दुर्घटनामा परेको छ । पीएएफले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो...
शान्ति श्री परियारलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेपछि …
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - October 8, 2020
काठमाडौं । लोक गायिका शान्ति श्री परियार र ऋषिराम खड्काको नयाँ गीत ‘ढुंगा लाग्यो पहिलो गासैमा’ सार्वजनिक भएको छ । माया पिरतीमा पारिवारिक बाधा आईपरेपछि...
सुनिल र एलिनाको ‘मसला’मा भट्टीमा आउने ग्राहकको कथा
काठमाडौं । लोकप्रिय लोकपप गायक सुनिल गिरीको नयाँ गीत मसला सार्वजनिक भएको छ । सुनिल र एलिना चौहानको स्वरमा सजिएको गीतमा पछिल्लो समय चर्चित...
सीमा मिचिएकोमा विरोध गर्नेहरु माइतीघरबाट पक्राउ (फोटोफिचर)
प्रदेश ३ द्वारिका काफ्ले - May 11, 2020
काठमाडौं । भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोडन सडक निर्माण गरेपछि विरोधमा निस्किएकाहरुलाई प्रहरीले माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ गरेको छ । सोमबार दिउसो विद्यार्थी...
यो पनि पढ्नुहोस कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको आज प्रमबाट शुभारम्भ
Breaking News राजधानी समाचारदाता - January 27, 2021
हरेक तानाशाह अन्तिम घडिमा ओली सरकार झै नागरिकमाथि दमनमा उत्रन्छन् : वरिष्ठ नेता पौडेल
काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अभिव्यक्ती र सरकारले नागरिकमाथि गर्ने व्यवहारले सरकार र्निलज्ज रुपमा प्रस्तुत भएको टिप्पणी गरेका...
वर्षामानको प्रश्नः ओलीले अदालतमा सेटिङ मिलाएको छु भनेका छन्, कुरा के हो ?
राजधानी संवाददाता - January 24, 2021
नगेन्द्रराज पौडेल - January 25, 2021
यो पनि पढ्नुहोस लोकतान्त्रिक आन्दोलनको घातक प्रवृत्तिविरुद्ध अझै लड्छौँ : प्रचण्ड